३ साउन, काठमाडौं । बंगलादेशमा देशव्यापी रुपमा लकडाउन गरिएको भए पनि कोरोना संक्रमणको दर बढेको पाइएको छ । बंगलादेशमा पछिल्लो केही दिनमा कोरोनाका संक्रमितहरू बढ्दै गएपछि दुई हप्ताअघिदेखि नै लकडाउनको घोषणा गरिएको राजधानी ढाकाबाट प्राप्त भएका समाचारमा जनाइएको थियो ।
यहाँ गएको २४ घन्टामा कोरोनाका आठ हजारभन्दा बढी संक्रमितहरु देखिएका छन् । त्यस्तै शनिबारमात्र यहाँ २०४ जनाको ज्यान गएको छ । बंगलादेशको सरकारले करिब महिना दिनदेखि कतै कडा र कतै केही खुकुलो खालको लकडाउन घोषणा गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
बंगलादेशको प्रेस इन्फरमेसन्स डिपार्टमेन्टका तर्फबाट यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सो समाचार सार्वजनिक गरिएको हो । यहाँका अधिकारीहरुका अनुसार यहाँ हालसम्म १० लाख भन्दा बढी संक्रमित पाइएका छन् भने १७ हजार जना भन्दा बढीको ज्यान गएको छ ।
यहाँ लकडाउनका कारण प्रायः सरकारी कार्यालय तथा अदालतहरू बन्द रहेका छन् । तर औधोगिक क्षेत्रहरू भने आलोपालो गरी चलिरहेका छन् । लकडाउनमा सबै सार्वजनिक तथा निजी कार्यालयहरू तथा अदालतहरू बन्द छन् । तर उद्योग तथा मिलहरू आलो पालो सञ्चालन हुने अधिकारीहरूले जनाएका छन् । त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो समय संक्रमण तथा मृत्युको दर पनि बढ्दै गएको जनाएको छ ।
बलम्बुको सडक पेटीमा एक पुरुषको शव फेला
सामूहिक दाहसंस्कारका तस्वीरहरु प्रकाशन नगर्न प्रेस काउन्सिलको आग्रह
भारत आउजाउ गर्दै हुनुहुन्छ ? यी १३ वटा नाका मात्रै खुला छन् !
नेपाल–भारत सिमामा बग्ने नदीमा बुद्धको मूर्ति भेटियो,डोमा एसएसबीको नियन्त्रणमा
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होम आइसोलेसनमा
कोरोनाबाट सिन्धुपाल्चोकका एक पुरुषको मृत्यु
ओमिक्रोन भेरियन्टको चिन्ताबीच सिंगापुर र मलेसियाले सीमा खोले
जलवायु परिवर्तनका कारण जंगलको डढेलोमा बृद्धिः सीएसआइआरओ